Muwaaddin Gurigisa laga heystay 30 Sano oo manta lagu wareejiyay – Radio Baidoa
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed ayaa maanta muwaadin Soomaaliyeed ku weeriyay Guri laga haystay ku dhawaad 30 Sano sida lagu sheegay war ka soobaxay Maamulka Gobolka Banaadir.
Maxamed Shariif Cumar oo mudo 30 sano ah laga haystay gurigiisa ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay,waxaana ku wareejiyay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaaladda Muqdisho.
Gurigaan uu maanta la wareegay Maxamed Shariif Cumar ayaa ku yaala waaxda Jabuuti ee degmada Kaaran ee Gobolka Banaadir.
“Maxamed Shariif Cumar oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo muda 30-Sano si sharci dara ah looga heystay gurigiisa ayaa waxaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) gurigaan oo ku yaala waaxda Jabuuti ee degmada Kaaran” ayaa lagu yiri war ka soo baxay Maamulka Gobolka Banaadir.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in gurigaan lagu daganaa qaab sharci daro ah hayeeshee,dadkii daganaa ay ogolaadeen in ay ka guuraan.
“Gurigaan la wareejiyay ee sida sharcidar ah lagu daganaa ayaa waxaa ka muuqday dayac xoogan inkastoo dadkii mudadaasi fog daganaa ay ogolaadeen in si nabadgalya leh ku wareejiyaan iyagoo ka jawaabaya baaqa duqa Magaalada Muqdisho ee ahaa inaan la aqbali doonin in Caasimadda gudaheeda qof hantidiisa sharcidara lagu heesto” ayuu lagu yiri warka ka soo baxay Maamulka Gobolka Banaadir.
Todobaadkii hore ayaa sidan oo kale Guri ku yaalla Degmada Xamar jajab waxaa uu Guddoomiyaha Gobolka ku wareejiyay wakiilka qof leh Guri laga heystay.